Guddoomiyaha guddiga doorashada Puntland oo ka waramay socdaal dalka Ingiriiska uu ku joogo – Radio Daljir
Oktoobar 22, 2012 2:38 b 0
London, Oct 22 – Guddoomiyaha guddiga KMG ee doorashooyinka Puntland Maxamed Xasan Barre ayaa howlo shaqo u jooga magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska oo todobaadkii hore uu booqday.
Isagoo waraysi gaar ah siiyay radio Daljir ayaa waxa uu sheegay inuu la kulmay jaaliyadda Puntland iyo masuuliyiinta dalka Ingiriisk oo uu kala hadlay taageeridda geeddi socodka dimuqraadiyadeenta Puntland ee xukuumaddu sheegtay nidaamka xibiyada ku dhisan dalka inay ugu rarri doonto.
Masuuliyiinta iyo jaaliyaddii uu kulanka la yeeshay ayuu tilmaamay gudoomiyaha guddiga doorashada Maxamed Xasan Barre inay soo dhoweeyeen nidaamka axsaabta ku dhisin ee dowalddu ay bilowday.
“Ingiriiska waxaa ay noo balan qaadeen inay naga caawin doonaan dimuqraadiyadeenta Puntland” ayuu yiri Gudoomiyaha Guddiga doorashada Maxamed Xasan Barre.
“Waxaan ka sharaxnay geeddi socodka dimuqraadiyadda oo sanad iyo bar kaliya loo tallaabsaday” ayuu yiri Maxamed Xasan Barre mar uu ka hadlay hadal uu ka jeediyay machadka cilmi baaritsa Britain ee Chatum House.
Mar la waydiiyay hadii ay jiraan dad ka horyimid nidaamka xibiyada ee xiligaan la bilaabayo ayaa waxaa uu xusay inay jiraan shaqsiyaad tiro yar oo meelaha qaarkood kusoo bandhigay dhaliillo sida uu yiri, isagoona intaa ku daray inay dimuqraadiyaddu qayb ka tahay qof waliba inuu fikirkiisa uu soo bandhigo.
11-kii bishii September ee sanadkan ayay ahayd markii xukuumadda Puntland ay ku dhawaaqday in siyaasiyiiintu furan karaan xibiyada siyaasadda ee Puntland, siyaasiyiinta Puntland ee u sharaxan doorashada madaxtinimada ayaa siweyn uga horyimid qorshahaasi.